Iimbono zolwandle eLastres-El Canto De Las Gaviotas - I-Airbnb
Iimbono zolwandle eLastres-El Canto De Las Gaviotas
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLuisma
Iimbono zolwandle kunye nesandi samaza zihamba nawe kwindlu yethu entle yasemaphandleni eLastres, enye yezona dolophu zinemifuziselo e-Asturias. Efumaneka kwiziko lembali, uhamba ngomzuzu-5 ukusuka "Playa El Escanu" kunye nechweba, i-5-minute drive ukusuka "Playa de la Griega". Indlu yethu ephangaleleyo nepholileyo yindawo egqibeleleyo yokonwaba njengesibini, nabahlobo okanye njengosapho. Siyihombise ngononophelo olukhulu kunye neenkcukacha ukuze ukwazi ukuyonwabela ukusuka kumzuzu wokuqala.
Indlu yethu ibanzi kakhulu kwaye ikhululekile ukuziva isekhaya ukusuka kumzuzu wokuqala. Kumgangatho ophantsi sifumana ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu, igumbi elinomatshini wokuhlamba kunye negumbi lokuhlala elibanzi elinombono wezibuko kunye noLwandle lwaseCantabrian. Amagumbi okulala ama-3 kunye negumbi lokuhlambela elineshawari abekwe kumgangatho wokuqala. Igumbi lokulala eliphindwe kabini likumema ukuba uphuphe kwibhedi eyi-160 kunye noomatrasi abatsha, abakumgangatho ophezulu.
Igumbi lokulala elincinci linomandlalo we-140 cm, kwakhona elitsha kunye nesiphelo esiphezulu. Eli gumbi lipholile kwaye ngaphezu kwayo yonke into linemibono yezibuko. Apha uya kuphupha ingoma yolwandle...
Sikwanayo negumbi lokulala / igumbi lokunxiba elinegumbi elikhulu kunye nesifuba esikhulu sedrowa kwigumbi lokulala lesithathu. Kweli gumbi sinokubeka ibhedi yesofa etofotofo kakhulu kumntu omnye.
ILastres yenye yezona dolophu zibalulekileyo kunxweme lwase-Asturian. Idolophu endala intle kakhulu. Izitrato zayo ezincinci kunye neekona zayo zifanelekile ukuphononongwa. Ngokumalunga neLastres cuisine, yenye yezona ndawo zilungileyo zokutya kwaye ukonwabele ukutya okudumileyo kwe-Asturian.
Umbuki zindwendwe ngu- Luisma
Sisezandleni zakho kuwo nawuphi na umbuzo, ingcebiso okanye amathandabuzo.
Inombolo yomthetho: VV1806